Akụkọ - YALIS sonyere na CIDE 2021
CIDE 2021 nọ ebe a dị ka ahaziri, YALIS na -ebubatakwa ụdị ngwaahịa ọhụrụ
Ara nke nhazi ụlọ niile na -abịa
Site na mmụba nke ọkwa oriri na nkwalite echiche echiche na-aga n'ihu, nhazi ụlọ niile aghọọla eziokwu a na-apụghị ịgbagha agbagha nke oriri ezinụlọ. China bụ mba nwere nnukwu ihe owuwu ọhụrụ n'ụwa, na -eme ihe ruru 40% nke ihe owuwu ọhụrụ kwa afọ nke ụwa. A maara ihe ngosi ihe ngosi ụlọ ọrụ China International Door (CIDE) dị ka "ihe na -akwalite mmepe ụlọ ọrụ", nke kwalitere nnukwu mgbanwe ụlọ ọrụ na imekọ ihe ọnụ ahịa. Ọ bụ onye nkwalite na onye akaebe maka ọganihu nke ụlọ ọrụ ọnụ ụzọ na ahịa ụlọ ahaziri iche.
Na Mee 6, 2021, e mepere ya nke ọma na Halllọ ihe ngosi mba ụwa nke Tianzhu, Beijing. E megharịrị ihe ngosi ahụ nke ọma. A na -ekewa mpaghara ngosi ahụ na mpaghara ihe ngosi isiokwu dị ka nhazi ụlọ niile, ụlọ mara mma, ọnụ ụzọ osisi (windo), akụrụngwa, na akụrụngwa nrụpụta nwere ọgụgụ isi, nke nwere ike ilekwasị anya na agbụ ụlọ ọrụ mgbago mgbago na mgbada, yana ịkwalite ndị ngosi na ndị ọbịa.
Dịka enyi ochie CIDE, YALIS n'ezie agaghị anọ. N'ime ihe ngosi a, ụlọ ntu YALIS ka juputara na ewu ewu. YALIS kwadebere nke ọma wee weta ngwaahịa ọhụrụ dị iche iche, gụnyere ngwọta ngwaike ọnụ ụzọ, ngwa ngwaike ọnụ ụzọ na mkpọchi ụzọ dị mma. Ọtụtụ aka ụzọ ọhụrụ pụtara n'etiti ọtụtụ ụdị ngwaike site n'ọdịdị ha dị elu, ikuku na ọkwa dị elu, na-adọta ọtụtụ ndị ngosi na ndị na-azụ ahịa ka ha kwụsị maka ahụmịhe na mgbanwe miri emi.
Ọtụtụ Isi Ihe ngosi
Site na nkwalite na -aga n'ihu nke ụkpụrụ obibi ndụ ndị mmadụ, ihe ndị a chọrọ maka ịchọ ụlọ mma na -arịwanye elu, ọnụ ụzọ ime ụlọ na -eji nke nta nke nta na -etolite n'ịkwalite mmadụ na iche iche. Site na ọnụ ụzọ osisi siri ike mbụ na ọnụ ụzọ iko, ruo n'ọnụ ụzọ a na-adịghị ahụ anya, ọnụ ụzọ dị elu nke ụlọ, ọnụ ụzọ profaịlụ, ọnụ ụzọ enyo enyo dị warara na ihe ndị ọzọ. Ya mere, ọ kwalitekwara ụlọ ọrụ ngwaike ime mgbanwe kwekọrọ. YALIS ewepụtala ngwaike ngwaike dabara adaba maka ọnụ ụzọ dị iche iche, nke na-enweghị ike iweta ndị na-emepụta ọnụ ụzọ dị elu mmụba na ọnụ ahịa ngwaahịa agbakwunyere, na-abawanye mmetụta bara uru nke ọnụ ụzọ, kamakwa na-egbo mkpa ịchọ mma nke ndị na-azụ ahịa.
Dịka ọmụmaatụ, maka ọnụ ụzọ enyo enyo dị warara, imepụta iko ụzọ iko n'ahịa taa enweghị ike gboo mkpa ndị na -emepụta ọnụ ụzọ iko. Site n'ọtụtụ nyocha ahịa, YALIS mụtara na ndị na -emepụta ọnụ ụzọ iko nwere ihe mgbu na nhọrọ mkpọchi ọnụ ụzọ iko, dị ka mmegharị siri ike nke nhazi nke ime, nhọrọ ole na ole, na ụdị nke siri ike. Ya mere, YALIS mebiri ọdịnala wee hazie usoro mkpọchi ọnụ ụzọ iko NO.292, usoro mkpọchi ọnụ ụzọ iko NO.272 na mkpọchi ụzọ iko ndị ọzọ, na-ejikọ arụmọrụ na nka nka nke ngwaike na ọnụ ụzọ iko n'ime otu, na-eweghachi nghọta na ịdị elu dị elu. ọgwụgwụ udidi nke ebughibu etiti iko ibo.
Banyere ọnụ ụzọ osisi, mkpọchi mkpọchi nwere ike dakọtara nke ọma na ihe dị iche iche na agba nke ọnụ ụzọ iji bulie mmetụta anya n'ozuzu bụ nhọrọ dị ọkụ n'ahịa. Ya mere, YALIS bidoro ọhụrụỌTỤTỤ, Mmiri ozuzo, CHAMELEON na usoro mkpọchi mkpọchi ụzọ ndị ọzọ.
N'ezie, na mgbakwunye na isi ihe ndị ewepụtara n'elu, ihe ngosi a ga -egosipụtakwa ụdị ngwaahịa ọhụrụ na ihe owuwu ọhụrụ. Site na CIDE, anyị na -aghọta nke ọma mkpa ndị ahịa anyị, na -enwekwu obi ike n'ọdịnihu. Anyị na -atụ anya izute gị oge ọzọ!
Oge ezipụ: Mee-14-2021